Author Topic: အမောပြေဟာသမှတ်စု (Read 499414 times)
« Reply #780 on: January 09, 2012, 12:11:34 PM »
@nine nine sanay
« Reply #781 on: January 09, 2012, 04:41:18 PM »
(၁) အီစီကလီစိတ်ဓာတ် ရှင်သန်ထက်မြက်ရေး။
(၂) Chatting ကိုအခြေခံ၍ အခြားဖွန်ကြောင်ခြင်း ကိစ္စများ ဘက်စုံဖွင့်ဖြိုး တိုးတက်အောင် တည်ဆောက်ရေး။
(၃) ပြည်တွင်းပြည်ပမှ ရုပ်ရည်ရှိ ယောက်ျားလေး မိန်းကလေး များအား ဖိတ်ခေါ်(Invited) ၍ ဆက်ဆံရေး ဖွံဖြိုးတိုးတက်အောင် တည်ဆောက်ရေး။
(၄) ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ဆက်ဆံရေးနှင့်အညီ ခေတ်မှီ၍ ရင်ခုန် ဖွယ်ကောင်းသော ဇာတ်လမ်းများ ဆက်လက်ဖန်တီးရေး။
(ဒီမှာ ရှိသေးတယ် မဖတ်ရသေးသူများအဖို့အတွက်)
Re: အချစ်တက္ကသိုလ်မှ စာစုအပိုင်းအစများ
« Reply #64 on: September 01, 2011, 12:50:38 PM »
« Reply #782 on: January 09, 2012, 05:27:18 PM »
« Reply #783 on: January 10, 2012, 12:53:55 PM »
အသက် (၈၄)နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ အဖွားအိုတစ်ဦးဟာ စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် အိမ်ထောင်ပြုခဲ့ပါတယ်...
အဲဒီသတင်းကိုကြားတဲ့ ဒေသခံသတင်းဌာနတစ်ခုက အဖွားအိုကို လာရောက် အင်တာဗျူးလုပ်ခဲ့ပါတယ်...
သတင်းဌာနက အဖွားအိုရဲ့ ဘ၀အကြောင်းတွေ...ဒီအသက်အရွယ်ရောက်မှ အိမ်ထောင်ပြုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အဖွားအိုရဲ့ ခံစားချက်တွေကို မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်...
အဲဒီနောက်မှာတော့ စတုထ္တမြောက်ခင်ပွန်းဖြစ်သူရဲ့ အလုပ်အကိုင်ကို မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်....
"အမေ့ခင်ပွန်သည်ရဲ့ အလုပ်အကိုင်လေး သိပါရစေ?"
ဆက်လက်ပြီးတော့ သတင်းဌာနက စိတ်ဝင်တစားနဲ့....
"အမေ စိတ်မဆိုးဘူးဆိုရင် အရင်အိမ်ထောင်(၃)ဆက်က ခင်ပွန်းသည်တွေရဲ့ အလုပ်အကိုင်လေးတွေ ကိုလည်း သိချင်ပါတယ်..."
အဖွားအိုဟာ အရင်အတိတ်က အကြောင်းတွေကို ပြန်စဉ်းစားဖို့ ခေတ္တခဏ ငြိမ်သက်သွားပြီး.... ခနအကြာမှာတော့...မျက်နှာထားပြုံးပြုံးနဲ့ ဂုဏ်ယူဝံ့ကြွား ပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်....
"အမေအသက် (၂၀)အရွယ်တုန်းက လက်ထပ်ခဲ့တဲ့သူက ဘဏ်လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်တစ်ယောက်ပါ....
အဲဒီနောက် အသက် (၄၀)အရွယ်မှာ လက်ထပ်ခဲ့တဲ့ ဒုတိယမြောက် ခင်ပွန်းကတော့ ဆပ်ကပ်ပြပွဲကို ဦးစီးသူတစ်ယောက်ပါ...
နောက်ပြီး...တတိယမြောက်တစ်ယောက်ကတော့ ဘာသာရေးတရားဟောဆရာ....အမေ့အသက်(၆၀)အရွယ်မှာ လက်ထပ်ခဲ့တာပါ...
အင်တာဗျူးလုပ်သူဟာ အံ့သြစွာနဲ့ အဖွားအိုမျက်နှာကို ငြိမ်သက်စွာ စိုက်ကြည့်နေပြီး... ခဏအကြာမှာ နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုကို ထပ်မေးခဲ့ပါတယ်....
"အမေက ခင်ပွန်း ၄ ယောက်ကို ဘယ်လိုအစီအစဉ်နဲ့ အခုလို ကဗျာဆန်ဆန် လက်ထပ်ခဲ့တာလဲ"
"သိပ်လွယ်တာပေါ့ ငါ့သားရယ်....ပထမတစ်ယောက်ကို အမေက ငွေအတွက် လက်ထပ်ခဲ့တယ်...
ဒုတိယတစ်ယောက်ကိုတော့ ရှိုး(Show)အတွက် လက်ထပ်ခဲ့တယ်...
နောက်ဆုံးတယောက်ကတော့ သွားချိန်ရောက်ပြီဆိုတော့ သွားဖို့အတွက်ပေါ့...သားရယ်..." ....တဲ့......။
« Reply #784 on: January 10, 2012, 04:39:08 PM »
တစ်ခါက ညတစ်ညမှာ လူတစ်ယောက်ဟာ အရက်မူးပြီးအိမ်ပြန်လာတော့ ဝက်တဲကို နေအိမ်အမှတ်နဲ့ဝင်ပြီး ဝက်မဘေးမှာဝင်ခွေရင်း ပြောလိုက်တယ်။
"မိန်းမ... ငါ့ကိုရေတစ်ခွက်လောက် ခပ်ပေးစမ်းပါ!"
လူသံကြားတော့ ဝက်မက "အီ.." လို့ အသံတစ်ချက်ပြန်ပေးတယ်။ ဒါကို အဲဒီလူက ဝက်မကို လက်နဲ့ တစ်ချက်စမ်းကြည့်ရင်း ပြောလိုက်တယ်။
"မခပ်ပေးဘူးဆိုလဲ နေပေါ့ကွာ.. မင်းက ဘာညည်းတာလဲ? မင်းအင်္ကျီကလဲ အမွေးတွေနဲ့ ကြယ်သီးကလဲ နှစ်တန်းတောင်ပါလား?"
« Reply #785 on: January 10, 2012, 04:40:09 PM »
နောက်ချေးပိုးနဲ့ ခြင် ရည်းစားဖြစ်တော့ နောက်ချေးပိုးကမေးတယ်။
"ခြင်လေး.. မင်း ဘာအလုပ်လုပ်သလဲ?"
"ကျွန်မက ဆေးထိုးတဲ့ နပ်စ်မပါ"
"ဟာ... ရေစက်ပဲ.. ငါ့အလုပ်ကလဲ တိုင်းရင်းဆေး ဆေးလုံးဆရာလေ
« Reply #786 on: January 10, 2012, 04:42:15 PM »
အဘိုးအိုတစ်ယောက် ငွေထုတ်စက်မှာ ငွေလာထုတ်တယ်။ ဘဏ်ကငွေထုတ်စက်တွေက အသံစနစ်နဲ့ဖြစ်တယ်။
စစ်စတန်က "လျှို့ဝှက်ဂဏန်းရိုက်သွင်းပါ"လို့ ပြောတဲ့အချိန် အဘိုးအိုက ပါးစပ်ကိုလက်နဲ့ကွယ်ရင်း ဂဏန်းလက်ကွက်ကီးဘုတ်နားကပ်ပြီး တိုးတိုးပြောလိုက်တယ်။
« Reply #787 on: January 10, 2012, 04:48:56 PM »
သမီး... မေမေ တကယ်လို့ လူကြီးတွေက "ငါစားတဲ့ဆားက နင်စားတဲ့ဆန်ထက်တောင်များတယ်"လို့ ဆိုဆုံးမလာတဲ့အခါ မေမေ ဘယ်လိုပြန်ပြောမလဲ?
မေမေ... မေမေလည်း မသိဘူး။ သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံက မေမေတို့ထက်များတယ်လို့ ဆိုလိုချင်တာဖြစ်မှာပေါ့။
သမီး... ဟင်း.. မေမေကလဲ... ဆားစားတာများရင် ကိုယ်ခန္ဓာအတွက်မကောင်းဘူးလို့ မေမေ သတိမပေးတော့ဘူးလား?
@Nine Nie SaNay
« Reply #788 on: January 11, 2012, 08:05:09 AM »
« Reply #789 on: January 11, 2012, 08:10:23 AM »
Difference between Men and Women in the toilet